“Waxba kama jiraan!” – Ganacsade Mire Indha-Yare oo beeniyey in beertiisa lagula kala wareegey Silvia Romano | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka “Waxba kama jiraan!” – Ganacsade Mire Indha-Yare oo beeniyey in beertiisa lagula...
“Waxba kama jiraan!” – Ganacsade Mire Indha-Yare oo beeniyey in beertiisa lagula kala wareegey Silvia Romano
(Muqdisho) 15 Maajo 2020 – Ganacsade Mire Cismaan Warsame (Mire Indha-Yare) ayaa gebi ahaanba beeniyey warka sheegaya in beertiisa lagula kala wareegey gabadha Silvia Romano.
Saxaafadda Talyaaniga ah gaar ahaan Radio Radicale ayaa warbixin dheer oo uu ka sameeyey sida loosii daayey Silvia oo iminka Caa’isha la yiraahdo ku xusay magacyada Soomaali uu ku jiro ganacsade Mire oo ah Guddoonka Beeraleeyda, sida uu sheegay.
“Beertaydu waxay ku taallaa Afgooye warka sheegaya inay sirdoon wax kula kala wareegeenna wax ka jiraa ma jiraan,” ayuu yiri Mire.
Wuxuu intaa raaciyey inuu isagu diyaar u yahay inuu arrintan uga warramo ciddii doonaysa oo isaga lala soo xiriiro.
Warqaadka La Repubblica ayaa isna qoray inuu waraysi ka qaaday afhayeenka Al Shabaab uu ku sheegay in ay “magdhow ka qaateen Silvia”, balse Shabaabka ayaa beeniyey.
Previous articleTurkiga oo albaabbada u furaya bukaannada ka imanaya 31 dal oo ay Somalia ku jirto (Bukaannada la aqbalayo & taariikhda)
Next articleDAAWO: Qadar oo Muqdisho & Hargaysa ka dejisey gargaar dawo ah oo lagula tacaalayo Covid-19 + Sawirro